ओली कागजी बादसाह भएर ढलीसके अन्तिम घोषणा मात्र गर्न बाँकी छ : झाक्री | Chitrawan Online
चितवनमा आयोजना गरियो विजय जुलुस र विजय सभा
थप ९४ मा कोरोना पुष्टि : एकको मृत्यु भएसंगै ज्यान जानेको संख्या २ हजार ६६ पुग्यो
महाशिवरात्रीमा रत्ननगरमा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने
सन्दीपले खेल्ने ‘द हन्ड्रेड’को खेल तालिका सार्वजनिक
सर्वोच्च अदालतले गर्यो संसद विघटनलाई बदर
नेपाली मुलका क्रिकेटर जय विष्ट : भारतमा १४१ रनको धमाकेदार पारी
उर्लाबारीमा आन्दोलन : अनुहार नै नचिनिने व्यक्तिको फोटो घटनास्थल मुचुल्कामा संलग्न गरेको आरोप
भागरथीको जस्तै अब निर्मला पन्तको हत्यारालाई अविलम्ब सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
पछिल्लो २४ घन्टामा थप १ सय २५ मा कोरोना संक्रमण
प्रचण्ड-माधव नेकपाद्वारा ६८ जिल्लामा नेतृत्व चयन
Home मुख्य खबर ओली कागजी बादसाह भएर ढलीसके अन्तिम घोषणा मात्र गर्न बाँकी छ : झाक्री
ओली कागजी बादसाह भएर ढलीसके अन्तिम घोषणा मात्र गर्न बाँकी छ : झाक्री
Posted By: Ramu Acharyaon: २८ माघ २०७७, बुधबार १८:१८ In: मुख्य खबर, राजनैतिक, राष्ट्रिय समाचारNo Comments
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा सबैले बोल्न पाउने बताउनुभएको छ । बुधबार राजधानीमा भएको नेकपाको बृहत आमसभालाई सम्बोधन गर्दै झाँक्रिले मुखमा लगाएको टेप खोल्दै बोल्न पाउने अधिकारलाई कसैले खोस्न नसक्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो रगत र पसिनाले, हजारौँ सहिदको बलिदानबाट प्राप्त गरेको यो परिवर्तनलाई एकैरातमा च्यातचुत गर्नेका विरुद्ध बोल्छौँ । लोकतन्त्रमा बोल्न कुनै तानशाहले रोक्न सक्दैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ओली कागजी बादसाह हुन । उनी ढलीसके अन्तिम घोषणा मात्र गर्न बाँकी छ ।’ झाँक्रीले एउटा खलपात्रको विरुद्धका बोल्दै गर्दा महिलाको अस्मितामाथि आँच आएको कसले भन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले महिलाको अस्मिता निर्मला, भागरथी, सम्झना लगायतका बालिकाहरु बलाकृत हुँदा चाँहि महिला अस्मिता लुटिएन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि पदमा लिंग हुँदैन त्यो सार्वजनिक पद हो । अनेमसंघ भन्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको प्राइभेज संस्था छ । प्रतिगामी कदमविरुद्ध बोल्दा महिलाको अस्मितामा आँच आयो भन्ने यी संस्थाका मानिसहरु भागीरथीका हत्यारालाई कारबाही गर भनेर गृहमन्त्रालयल पुगेकी पुगेनन् ?
अब पनी ओलीले नबुझे जनताले बालुवाटार, सिंहदरवार घेर्छन : प्रचण्ड
प्रणय दिवसमा प्रकाश सपुतले सौराहामा धुम मच्चाउने
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार २०:३७
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १८:३९